ပိုကောင်းသော အသင်းကို နည်းပြသစ် ဆက်ခံခွင့်ရမည်ဟု ဝင်းဂါး ဆို၊ ပရိသတ် တစ်ဦးအနေဖြင့် အမ်းမရ? - Yangon Media Group
ပိုကောင်းသော အသင်းကို နည်းပြသစ် ဆက်ခံခွင့်ရမည်ဟု ဝင်းဂါး ဆို၊ ပရိသတ် တစ်ဦးအနေဖြင့် အမ်းမရ?
အာဆင်နယ်နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးက မိမိ၏နေရာတွင် ဆက်ခံမည့် မည်သည့်နည်းပြမဆို လူအများထင်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုကောင်းသောအသင်းကို ဆက်ခံရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်နည်းပြအဖြစ် ၂၂ နှစ်ကြာတာဝန်ယူခဲ့သော ဝင်းဂါးမှာ ယခုရာသီအကုန်တွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်တော့မည်ဖြစ် ပြီး ၎င်းအတွက် နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်ဖြစ်သော ဘန်လေနှင့် ပွဲတွင် အသင်းက ဂုဏ်ပြုမှုများပြု လုပ်ခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးတွင်လည်း ဝိုင်ပုလင်းတစ် လုံး လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဝင်းဂါး၏ နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲတွင် ဘန်လေကို ၅-ဝ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သောအာဆင်နယ်မှာ ဘန်လေကို အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အဆင့်-၆ နေရာရရှိရန် သေချာခဲ့ပြီး ရာသီကုန်တွင် ဝင်းဂါး၏နေရာကို ဆက်ခံမည့်နည်းပြသစ်အဖြစ် အန်စလော့တီ၊ အင်းနရစ်၊ ဂျိုအာချင်လို၊ အလီဂရီ၊ ဗီအဲရာ၊ ဂျာဒင်၊ အွန်နရီ၊ အာတီတာနှင့် နာဂျယ်စမန်တို့အပြင် လီဗာပူးလက် ထောက်နည်းပြဘူဗက်ပါ ရေပန်း စားနေသည်။
ဝင်းဂါးက ”အသင်းရဲ့နည်းပြ သစ်ကိစ္စက ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမ ပတ်သက်လို့ ဒီကိစ္စကို လူသိရှင် ကြား ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ ဒီလိုနည်းပြသစ်ခန့်ထားရေးက ကျွန် တော့်အလုပ်မဟုတ်လို့ ဒီလူကိုရွေးပါ၊ ဒီလူကိုမရွေးနဲ့ ဆိုတာမျိုး တွေနဲ့ အသင်းကို ဖိအားမပေး ချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ တော့ နည်းပြသစ်ဟာ လူတွေထင်ထားတာထက်ပိုတဲ့ အသင်းကောင်း တစ်သင်းကို ဆက်ခံခွင့်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအသင်းဟာ စုစည်း မှုအားကောင်းပြီး လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ်မှာလည်းရှိနေလို့ လာမယ့် ရာသီမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြုလုပ် နိုင်စွမ်းရှိမှာ သေချာပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အာစင်ဝင်းဂါးက မိမိ၏ နောက်ထပ်အလုပ်သစ်အ ခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ အာဆင်နယ်၏ပွဲစဉ်များကို အမ်းမ ရိတ်ကွင်းသို့ လာရောက်အားပေး ရန်ကြိုးစားမည်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ် နည်းပြသစ်ကိုပင် အော်ဟစ်ပြောဆိုနိုင်သေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝင်းဂါးက ”ကျွန်တော့်အ နေနဲ့ မြောက်ဘက်ပွဲကြည့်စင်မှာလာပြီးအားပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ထပ် အလုပ်သစ်အပေါ်မှာလည်းမူ တည်နေသေးပြီး ဘယ်နေ့မှာ အလုပ်အားမလဲဆိုတာအပေါ် မူတည်နေတာပါ။ ပွဲကြည့်ခွင့် လက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လာဖြစ်ဖို့ ပိုသေချာတာပေါ့။ ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ရ တာ သိပ်ကောင်းတဲ့အချက်က နောက်လာမယ့်နည်းပြကို အော်ဟစ်ပြောဆိုမှုတွေ လုပ်နိုင်တာပါပဲ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပရိသတ်များ၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှု ခံရချိန်တွင် ထွက်ခွာရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ဟု ဆာရီ ဝန်ခံ
ဖားကန့်တွင် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်ဟောင်း ကမ်းပါးယံ ပြိုကျ၊ ၂၅ ဦး ပျောက်ဆုံး